နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က အသုံးပြုခဲ့သော ရခိုင်ရှေးဟောင်း လှေကြီး တစ်စင်းအား ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနက ရှာဖွေ တွေ့ရှိ
သတင်း	— July 11, 2012 at 10:34 pm	နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က အသုံးပြုခဲ့သော ရခိုင်ရှေးဟောင်း လှေကြီး တစ်စင်းအား ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနက ရှာဖွေ တွေ့ရှိ
Related Postsရခိုင်လူငယ် တစ်ဦး တိုက်ခိုက်သူများကို အရေးယူ အပြစ်ပေးရန် အ၀ကျွန်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသား ၅၀ ခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြအိန္ဒိယ အာသံ ဆူပူမူ နောက်ထပ် လူ ၄ ဦး သေဆုံးရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ခွင့် မရလိုက်သော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား ၄၈ ဦး အဖမ်းခံရမြန်မာက ငါးဖမ်းသမား ၂၈၉ ဦး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က ကယ်တင်အာဏာပိုင်တွေ တိုင်ကြားတာကို အရေးမယူတာ ဘာကြောင့်လဲ? ပဋိပက္ခတွေ ထပ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာလား? ဆက်စပ်သတင်းအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးစဉ် မဖွယ်မရာ လုပ်၍ အမ်းရဲစခန်းမှူး တရားစွဲခံရ၉၀ ခု ရွှေးကောက်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ကျေညာချက် ထုတ်ရခြင်းမှာ ဆက်လက် အလိမ်ခံရမည်ကို သတိပေးလို၍ ဖြစ်ကြောင်း မင်းပြားအမတ်ပြောဇနီးနှင့် ကလေးမွေးဖွားနုန်းကို ကန့်သတ်ထားသော မောင်တောခရိုင်တွင် Blacklist စာရင်းဝင် ကလေး အရေအတွက် ၆၀၀၀၀ ရှိနောက်ထပ်မြန်မာမှ မူဆလင် ၅ ဦး ဒက္ကားလေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရရခိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေးသင်ကျောင်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မီတီဖွဲ့မြန်မာနယ်စပ်က မလေးရှား ခိုးသွား အဖမ်းခံရ လှေစီးသမားများကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ပြန်ခေါ်ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံနယ်မြေတွင် ရတပ ပါတီ ဗဟိုကော်မီတီ မျက်နာ စုံညီ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်မြန်မာ အနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိအိမ်မပြန်နိုင်သေးသူ ၆၀၀ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂရုဏာမြန်မာမှ ဆန်များ သွားရောက်လှူဒါန်းမြန်မာသို့ ခိုလုံလာသည့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက် ဆန်အိတ် ၁၀၀ လှူဒါန်း (နိရဉ္စရာ သတင်းများကို မည်သူမဆို လွှတ်လပ်စွာ ကူးယူဖေါ်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် သတင်းရင်းမြစ်နေရာတွင် နိရဉ္စရာ နာမည်ကို ဖေါ်ပြရပါမည်။) Share: